Ihe kacha mkpa bụ mkpọpu ala bụ ime ka onye na -emetụta ihe maba n'ime oghere n'ime usoro mkpọgharị nkume, iji belata mfu ike sitere na nnyefe nke ike mmetụta site na mkpanaka mkpọpu ala, iji belata mmetụta nke oghere. omimi na arụmọrụ mkpọpu ala.
Mkpa nke ngwa: gbadaa olulu mmiri
Ihe mejupụtara: usoro rotary, usoro ibuli elu, usoro ịpị, usoro na -akwado ya na usoro mmetụta
Ihe na-egwu olulu ala bụ mmetụta rotary mkpọpu mmiri. Ọdịdị nke ime ya dị iche na nke mkpọtụ oke okwute. Nkesa gas ya na usoro na -emegharị piston nwere onwe ha, ya bụ onye na -emetụta ya. A na -ejikọ njedebe ihu n'ihu na ntakịrị ihe egwu egwu, na azụ na -ejikọ na mkpanaka mkpọtụ. Mgbe a na -egwu mmiri, onye na -emetụta ya na -abanye n'ime oghere, piston (hama) na mmetụta na -akwụghachi iji kụọ ọdụ ọdụ site na ngwaọrụ nkesa gas (valvụ), na -eme ka mkpọtụ ahụ metụta okwute na ala nke oghere. A na-enweta ntụgharị ọsọ ọsọ nke mmetụta na oghere ahụ site na usoro ntụgharị dị iche, ya bụ, moto ma ọ bụ ngwaọrụ ntụgharị pneumatic na mpụga oghere ahụ, na mkpanaka mkpọtụ jikọtara na njedebe azụ nke mmetụta. Akuku uzuzu nke a na -eme n'oge a na -egwu mmiri na -esite n'ime oghere gbapụta gas feng shui. A na -etinye gas gwakọtara n'ime ihe mmetụta site na etiti ọkpọ mmiri site na usoro ntụ ntụ, wee banye na ala oghere site na oghere ikuku na cylinder mmetụta.
A na-eji ya egwu olulu mmiri nwere dayameta nke 20-100 mm na omimi nke na-erughị mita 20 n'ime okwute dị elu karịa nke siri ike. Dị ka ike ha si dị, enwere ike ekewa ha n'ime ikuku, nkụ nke ime, hydraulic na mgbanye ọkụ eletrik. N'ime ha, a na -ejikarị mgbagharị okwute pneumatic eme ihe.
Na mgbakwunye na mkpọpu mmiri, enwere ike iji 80-150 mm obere dayameta gbadaa oghere mgbe a na-egwu olulu mmiri nwere dayameta na-erughị 150 mm. Mgbe a na -egwu olulu mmiri nwere dayameta na -erughị 70mm na kol ma ọ bụ nkume dị nro, a na -ejikarị mgbanye ọkụ eletrik ma ọ bụ mkpọda pneumatic. A na -eji moto (ma ọ bụ moto pneumatic) na -eburu ọkpọkọ olulu mmiri, a na -ewepukwa okwute site na gburugburu gburugburu na ọkpọ ọkpọ.
Nwụnye na nkwadebe
1. Kwadebe ọwa mmiri na-egwu egwu. Enwere ike ikpebi nkọwapụta nke ọgba ahụ dabere na usoro olulu. N'ozuzu, ịdị elu nke ọgba bụ 2.6-2.8 mita mgbe a na-egwu olulu kwụ ọtọ, na obosara nke ọgba mgbe a na-egwupụta elu, ala ma ọ bụ mmasị. Ọ dị mita 2.5 na ịdị elu ya bụ mita 2.8-3.
2. Na -ebute ọkpọ gas na mmiri, ahịrị ọkụ, wdg ka ọ dịrị nso ebe a na -arụ ọrụ maka ojiji ọzọ.
3. Dika ihe chọrọ n'olulu, ogidi a na -akwụsi ike. A ga -eji mbadamba osisi jikọta ọnụ elu na nke ala strut. A na -etinye axis kwụ ọtọ na mgbachi na ogidi n'otu ogo na ntụzịaka ụfọdụ. A na -eji winch aka ebuli igwe ahụ wee dozie ya na ogidi dịka akụkụ achọrọ, wee mezie ntụzịaka oghere nke igwe na -egwu ala.
Nnyocha tupu arụ ọrụ
1.Malite ọrụ, ọ dị mkpa iji nlezianya lelee ma ọkpọkọ mmiri ikuku ejikọtara ọnụ yana ma enwere mgbapụta ikuku ma ọ bụ mwepu mmiri.
2.Tụlee ma mmanụ mmanye ejupụtala na ya.
3. Lelee ma emechiela kposara, mkpụrụ na nkwonkwo nke akụkụ nke ọ bụla, yana ma a kwadoro kọlụm ahụ nke ọma.
Usoro igwu mmiri
Mgbe ị na -emepe oghere, buru ụzọ malite moto ahụ, ma sere aka onye na -emegharị ya mgbe nnyefe dị nkịtị. Mee ka ọ nweta ike na -akpali akpali nke ọma, wee dọrọ aka nke mmetụta mmetụta na -arụ ọrụ. Mgbe igwuchara ala, enwere ike mepee valvụ mmiri iji dobe ngwakọta ikuku na oke kwesịrị. Arụ ọrụ mkpọpu ala nkịtị. Mgbe ọrụ ịkwa ahụ na -eme ka onye na -ebupu mkpanaka na -agagharị ka ya na onye na -ejide ngwaọrụ wee kpaa, a na -egwu olulu mmiri. Iji kwụsị ọrụ moto wee kwụsị ikuku na mmiri nye onye na -emetụta ya, tinye ndụdụ ahụ n'ime oghere njigide nke onye na -ejide ọkpọ ọkpọ, mee ka moto tụgharịa ma weghachi azụ, ka ewee kewapụ njikọ ya na ọkpọ ọkpọ. wee jikọọ ọkpọkọ nke abụọ. Site na nke a, ị nwere ike rụọ ọrụ oge niile.
Ọnọdụ ụlọ ọrụ
Ọrụ dịịrị mmadụ
Ụdị ndị ọrụ
Nke gara aga: DTH Hammer
Osote: DTH Drill Bit φ90
Igwe na -egwu olulu mmiri
Ọnụ ego igwe na -agba olulu mmiri
Ụgbọ ala Borehole
Ọnụ ego igwe na -agba igwe Borewell
Onye ọkwọ ụgbọ ala kọmpat
Egwuregwu Core Hole
Akwụ ụgwọ igwe
Onye na -agba Crawler
Igwe na -agwụ ike nke ọma
Ọfụma nke ọma
Oghere Dill na Rock
Duru n'ime Rock
Malite ịgba Rig
Duru na Nkume
Igwe igwe Borewell
Mbanye n'ime Oke Nkume
Mbanye n'ime Mgbidi Nkume
Ịkụ ala n'ime aja
Ngwaọrụ igwu ala
Dth mkpọpu ala
Igwe Ngwuputa Mmiri
Ihe eji eme mmiri mmiri nke ọma n'ụlọ
Igwe eji eme mkpọtụ nke ọma n'ụlọ
Arụrụ ọrụ nke ọma Drilling Rig
Hydraulic Borehole Drilling Machine
Hydraulic Borewell Drilling Machine
Ọkpụkpụ Hydraulic Crawler
Mini Water Ọfọn Drilling Machine
Igwe igwe na -egwu mmiri nke Borehole
Ngwuputa mmanụ nke dị n'ụsọ oké osimiri
Onye na -egwu mmanụ
Ụlọ ọrụ ndị na -egwupụta mmanụ
Otu nwoke na -egwu olulu mmiri nke ọma
Onye na -agba mmiri Pneumatic
Igwe eji egwu mmiri Borehole
Igwe mkpịgharị Borewell na -ebugharị
Igwe nkwụnye mmiri na -ebugharị
Igwe eji ebugharị mmiri nke ọma
Igwe na -ebugharị mmiri nke ọma
Igwe na -egwu mmiri nke Portable
Isi Rock Drill
Igwe igwe na -emighị emighị emi
Igwe na -adịghị ala ala nke ọma
Obere igwe na -egwu olulu mmiri
Obere obere mmiri na -ebugharị nke ọma
Obere igwe na -agwụ ike Machine
Obere igwe na -egwu mmiri igwe
Obere mmiri na -egwu olulu mmiri
Obere Nchapụta igwe
Obere ihe na -egwu mmiri nke ọma
Machine Trailer Drill Machine
Trailer Drill Rig
Trailer nọkwasịrị n'ịgbakwa malite ịgba Rig
Tricone malite ịgba
Ụgbọala nọ n'elu mmiri Well Drilling Rig
N'okpuruala Water Drilling Machine
Igwe Mmiri Borewell
Mmiri mkpọpu mmiri Machine
Mmiri mgbapụta Drilling Machine
Mmiri Rig Drilling Machine
Igwe na -agwụ mmiri nke ọma
Igwe na -egwu ala nke ọma mmiri
Igwe Ọkwa mmiri nke ọma
Mmiri na -egwu olulu mmiri
Mmiri Ọfụfụ mkpọpu ala Rig Machine
Ngwaọrụ ịkụ ala mmiri nke ọma
Igwe Ọwa Mmiri
Igwe na -agwụ ike
Oke Drill Rig
Ọfọn Drilling Machine
Ọdịdị mkpọpu ala nke ọma
Xy 200 Drilling Rig
Mgbasa onu oghere
Pịnye igwe nchara olulu mmiri 180